प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज – Shuva News
Shuvanews १६ कार्तिक २०७५, शुक्रबार 295 Views
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ । गत सोमबार छातीमा समस्या भएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनुभएका उहाँ शुक्रवार साँझ डिस्चार्ज हुनुभएको हो । छातिको समस्या निको भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा थोरासिक सेन्टरका निर्देशक उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
शुक्रबार स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट हेरेर चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीलाई डिस्चार्ज गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारको नेतृत्व डा. अरुण सायमीका अनुसार अव प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विनाअक्सिजन हिडडुल गर्न सक्ने एवं एक हप्तापछि फलो अप चेकजाँच गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सकको टोलीमा निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह र अर्का चिकित्सक सन्तकुमार दास सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटार फर्कनुभएको प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
आराम हुँदै गएपछि ओलीले बिहीबार अस्पतालमै मन्त्रीहरूलाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिनुभएको थियो । नेपाल सरकारका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायतसँग उहाँले अस्पतालमै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।